Traditional medicine handbook
The information gathered in the handbook was collected through interviews with elders and herbalists in seven districts of Karen State. Treatments were included in the handbook only when it was proven that the same treatment cured or alleviated maladies in more than 10 patients. The handbook includes information on treatment for 15 illnesses. It also includes information about where to find the necessary herbs, how to collect them, how to process the plants and what treatment to follow.
ဤရိုးရာတိုင်းရင်းဆေးလက်စွဲစာအုပ် (မြန်မာဘာသာ) ပါ အကြောင်းအရာများသည် ကရင်ပြည် နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင် (၇)ခုမှ တိုင်းရင်းဆေးပညာကို နားလည်ပြီးကျင့်သုံးနေသောတိုင်းရင်းဆေးပ ညာရှင်များထံမှ အင်တဗျူးပြီးရ လာသော အ ကြောင်းအရာများဖြစ်သည်။ ဤစာအုပ်တွင် ရောဂါ ၁၅ မျိုးကိုကုသနိုင်သော ခရိုင် (၇) ရိုင်မှ မတူညီသည့်တိုင်း ရင်းဆေးနည်းပညာများ ပါဝင်သည်။ ထိုမျှမက လိုအပ်သော ဆေးပင်ဆေးမြစ်များကို မည်သည့်နေရာတွင် ရှာဖွေရ မည်၊ မည်သို့စုဆောင်းရမည်၊ မည်သို့အသုံးပြုရမည် စသည့်အကြောင်းအရာများ လည်းပါဝင်ပါသည်။